မြတ်လေးငုံ: အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မိုးရေးမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်တု ထားရှိမည်
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မိုးရေးမြို့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်တု ထားရှိမည်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်တပိုင်းပုံ ပလာစတာ ရုပ်တု တခုကို အိန္ဒိယ-မြန်မာ နယ်စပ် မိုးရေးမြို့တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားနေသည့် ဒေသခံ အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် မဏိပူရပြည်နယ် အခြေစိုက် Solidarity committee for Burma’s Democracy (SCBD) အဖွဲ့က ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်သည်။
ရုပ်တုဖွင့်ပွဲကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် သြဂုတ်လ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မိုးရေးမြို့ သတင်းထောက်များအသင်းခန်းမ၌ အခမ်းအနား ကျင်းပကာ ဆွေးနွေးပွဲများ လည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
ရုပ်တုကို မိုးရေးမြို့ရှိ Social science study center (လူမှုသိပ္ပံ လေ့လာရေးစင်တာ) တွင် ထားရှိသွားမည်ဟု SCBD အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် ရှေ့နေကြီး Mr. Ratan က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“Mr. Ksh. Santa နဲ့ Com. Sotin Kumar တို့ ခေါင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့ မနက်ဖြန်မှာ မိုးရေးမြို့ကို သွားမယ်။ တမူးဘက်က ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို ဖိတ်ကြားမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးမှာရှိတဲ့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပြည်သူတွေ တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်” ဟုဆိုသည်။
SCBD တွင် နာယက Mr. Ksh. Santa နှင့်အတူ အိန္ဒိယ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPI) ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည့် Com. L. Sontin Kumar တို့ ဦးဆောင်ကာ သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင် ငါးဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာ့အရေး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဒေသခံ နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ ရှေ့နေများ၊ အရာရှိဟောင်းများ ပါဝင်ကာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုများကို အစဉ်တစိုက် အားပေးခဲ့သည်။
လေးစား၊ အတုယူဖွယ် ကောင်းသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရုပ်တု ထားရှိရန် မိုးရေးမြို့ကို ရွှေးချယ်ရခြင်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရှေ့နေ Mr.Ratan က “မဏိပူပြည်နယ်က ပြည်သူတွေ ဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို ထောက်ခံကြောင်း ပြသ တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ အရေး လှုပ်ရှားတဲ့ ပြည်သူတွေကို ဂုဏ်ပြုတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ နယ်စပ်မြို့ တခုဖြစ်တဲ့ မိုးရေးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုပ်တုကို ထားဖို့ ရွှေးချယ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဏိပူ ပြည်သူတွေရော မြန်မာနိုင်ငံက
ပြည်သူတွေပါ မြင်တွေ့နိုင်အောင်ပါ” ဟု ဆိုသည်။
SCBD အဖွဲ့သည် အိန္ဒိယ နယ်စပ်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် အတူ ဆွေးနွေး ပွဲများ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ အခမ်းအနားများ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။